ढुङ्गावाली सुन्दरीको जादुमय स्वर, ढुङ्गा बेचेर छोरीको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न सकिएन भन्दै रोए बुबाआमा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 14, 2021 AdminLeaveaComment on ढुङ्गावाली सुन्दरीको जादुमय स्वर, ढुङ्गा बेचेर छोरीको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न सकिएन भन्दै रोए बुबाआमा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
गरिब परिवारमा जन्मिएकी रोदा राई जसको आवाजमा छुट्टै किसिमको जादु सुनिन्छ । पहाडको एकलास अनि खोलाको नजिकैमा उनको घर रहेको छ ।घरको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको परिवारमा बिचरा कलिलै उमेरमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी बोकेकी रोदा राईले निकै मीठो गित गाउछिन । उनले गाएको गित सुनेर सबै चकित हुन्छन ।
बोल्दा बोल्दै एक्कासि रुन थालेकी रोदाले मनै छुने गितहरु एकपछी अर्को गर्दै यसरी सुनाइन । आफ्ना कथा ब्यथा सुनाउदै जादा आमाबुबा पनि भक्कानो छोडेर रुन पुगे । भिडियो हेर्नुहोस्ः